Toriteny 14 Jolay 2013 | FJKM Amboniloha
Toriteny 14 Jolay 2013
“ Manantena fitahiana ny mino”
Genesisy 49 : 22 – 26 / Marka 10 : 46 – 52 / Galatiana 3 : 10 – 14
Isika izay mino dia tena manana tombony hanantena fitahiana avy amin’Andriamanitra .
Misy toetra andrasan’Andriamanitra amintsika Kristiana ny handrotsahany ny fitahiana.
1- Mila manana faharetana amin’ny fanatonana ny Tompo ny olona manantena fitahiana
Raha iverenantsika kely ny tantaran’ilay jamba, raha vao nahare fa handalo Jeso dia nipetraka teo amoron-dalana izy. Hevi panahy raketin’izany ; isika Kristina izay miandrandra fitahiana ve tena manam-pinivana sy faharetana hitady sy hiandry ny Tompo ? Tsarovy fa Andriamanitra mahay mandamina ny antsipirian’ny fiainan’ny olona ka arindrany hifanaraka zava-misy iainanao ny zavatra avelany hiseho sy hitranga amin’ny fiainanao na amin’ny mora na amin’ny sarotra. Ny andrasana amintsika dia ny faharetana tsy hivadika amin’Andriamanitra, ka hitady vahaolana na fitahiana hafa ankoatry ny ao amin’Andriamanitra.
2- Mila manana fanetren-tena ny olona manantena fitahiana
Antsoantso no nataon’ilay jamba na dia maro aza no nanakana ka nampangina azy. Na inona na inona sakana mety tsy hahatafakatra ny vavaka ataontsika, meteza hiantsoantso, ary modely tena tsara alaintsika tahaka ny vavaka nataon’ity jamba, vavaka feno fanetren-tena “Mamindra fo amiko ry Jesosy zanak’I Davida”. Midika izany hoe tsy mendrika aho Tompo o! Tsy manana na inona na inona aho fa ny famindramponao no antenaiko. Mampianatra antsika hanana fanetren-tena ny Tompo eo anatrehan’ny fangatahana sy fiandrasana ny fiatahiana. Tsy tokony hataontsika Kristiana mihitsy ny miady zo amin’Andriamanitra ka sahy hiteny hoe “izaho tokony, na tsy maintsy mahazo toy izao satria …” . Tsarovy fa fiainam-pamindram-po no ivelomantsika.
3- Mila manana fahatsoram-po ny olona manantena fitahiana
“Antsoy ilay jamba hoy Jesoa….. ” : ary nanontaniany hoe “inona no tianao hataoko aminao?”.
Valiny tsotra : “ny mba hampahiratana ny masoko” . Teo noho eo ihany dia nomen’i Jesoa azy izay nangatahiny. Mba ho toy izany koa isika manolona ny fangatahana rehetra ataontsika ka amin’ny antsipirian’ny zavatra rehetra izay ilaintsika dia tonony mazava sy mivantana eo anatrehan’Andriamanitra.
Ry Kristiana havana, tsarovy mandrakariva fa ny fitahiana omen’Andriamanitra, dia mitaona antsika hanaraka ny Tompo .
Tandremo anefa raha mahazo fitahiana amin’Andriamanitra ka mirehareha sy mihevitra ny tenanao ho mahavita zavatra. Mahaiza manome voninahitra an’Andriamanitra manoloana ny fitahiana izay narotsany ho anao.
ANDRIANARISON Violette , Mpitandrina
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 14 juillet 2013